မိအဲ . အိဆဲရှိမ ၏ ရှုခင်းနေရာ ZEKKEI Japan(2/2)
ပထမဆုံးအနေဖြင့် ထင်ရှားသော အိဆဲအိရှင်းဂူးရှိနေသော မီအဲခရိုင်သည် ခိအဲကျွန်းဆွယ်၏ အရှေ့ ဘက်တွင် တည်ရှိနေသော ပင်လယ်ကို မျက်နှာမူကာ တည်ရှိနေသော ခရိုင်။ ပင်လယ်နှင့် နီးသောကြောင့် ပင်လယ်ရေထွက်ပစ္စည်းများ များစွာရှိသော်လည်း ပင်လယ်မှ ဝေးကွာနေသော အနောက်ဘက်သို့ သွားပါက ဂန်းဆဲအိတောအုပ်များမှ ကျန်နေခဲ့သော တောင်တန်းများကလည်း ကျယ်ပြန့် စွာရှိနေပါသည်။ ခိအိကျွန်းဆွယ်တောင်ပိုင်းတွင်ရှိသော ရဲအိဘ၊ခုမနော့ဆန်းဇန်း နှင့် အိဆဲအိ ကို ဆက်သွယ်ထားသော ကမ္ဘာအမွေအနှစ် ခုမနော့ခိုလမ်းသည် ရှေးခေတ်ကတည်းက များစွာသော လူများ လမ်းလျှောက်လာရောက်ကာ ဘုရားဖုးကြသော လမ်းဖြစ်ပါသည်။
မိအဲ . အိဆဲရှိမ၏လူကြိုက်များနေရာ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်လစဉ်ကြည့်ရှုမှုနှုန်းဖြင့်စီသည်
အိုနိဂဂျော၊ ရှိခိရိမိဟမစသော ရှု့ ခင်းလှပသောနေရာတွင် ပြုလုပ်သော မီးပန်းပွဲ။ ပင်လယ်ပေါ်တွင်ရှိသော သင်္ဘောနှစ်စင်းမှ ပစ်လွှတ်လိုက်သောမီးပန်း၊ စက...
ပင်လယ်ပေါ်မှ အားလုံးသော မီးပန်းတွေကို လွှတ်တဲ့ မီးပန်းပွဲတော်ကြီးဖြစ်တယ်။ အထူးတလည်ကြီးမားတဲ့ ကြယ်မီးပန်းတွေရဲ့ ရိုးရှင်းတဲ့မီးပန်းတွေမှ မြိ...
နိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီးအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ ( ဆာကူရာနာမည်ကြီး ၁၀၀ ) မှာလည်း ရွေးချယ်ခံထားရတဲ့ ဆာကူရာနာမည်ကြီးနေရာဖြစ်တယ်။ အိဆဲမိုတိုလမ်းမှ ရှင...
နာဘရီမြစ်၏ စီးဆင်းမှုတစ်လျှောက်ရှိနေသော ခအိုချိဒနိသည် တကယ့်ကို တံစဉ်ဖြင့်ဖြတ်တောက်ထားသကဲ့သို့ ရေကျနေသောနေရာတွင် ကျောက်ဆောင်က ပျမ်းမျှ ၈ က...
အီဆဲရှင်းဂူး၏ အုဂျိဘရှိအရှေ့ မှ အိစုဇုဂဝတစ်လျှောက်တွင် စည်ကားသောမြို့ ။ ကျောက်ဖျာခင်းထားသော ပျမ်းမျှ ၈၀၀ မိတာခန့် ရှိသောလမ်းတွင် ခီရိစွတ်...